Synoda Anjozorobe: ny 50%-n’ny mpiasa ihany no misitraka Cnaps | NewsMada
Synoda Anjozorobe: ny 50%-n’ny mpiasa ihany no misitraka Cnaps
Nitohy tany amin’ny synodam-paritany Mananara Firaisana Anjozorobe ny fiofanana ataon’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps), ho an’ny fiangonana FJKM. Nitarika ny fiofanana ny talen’ny Fenitra sy ny fikarohana Cnaps, Rasoanaivo Didier, nisolo tena ny tale jeneraly mpisolo toerana, Rtoa Tsaboto Joslina.
Niisa 91 ny mpiofana avy any amin’ny fitandremana miisa 111 ao amin’ny synoda Anjozorobe. Ahitana mpiasam-piangonana 41, katekista 72, mpampianatra 70 avy amin’ny sekoly sivy, misahana ny asam-piangonana ao amin’ny synoda. Vao ny 50%, ny antsasany, ihany anefa ireo mpiasa misitraka ny tombontsoan’ny Cnaps. Nambaran’ny mpitandrina Rabenatoandro S. Mamy Yves, filohan’ny synoda Mananara, fa “ny fisotroan-dronono ihany no fantatra hatramin’izay, hay mahazo tombony avokoa ny ankohonana hatrany am-bohoka, amin’ny aretina, ny fanonerana raha sendra tra-doza am-perinasa, sns”. Tamin’izao fiofanana izao vao samy taitra ny rehetra.
Ho an-dRazafimahatratra Clément, lefitry ny lehiben’ny sampandraharaha Sass Cnaps, “efa ela ny tokony hahalalana ireny zavatra nampianarina ireny ka isaorana ny Tompo amin’ity fiofanana ity. Tokony hiezaka hahalala ny lalàna ny rehetra, indrindra ny fahatsiarovan-tenan’ny mpampiasa”.